“Fanabeazana tomombana no mampandroso ny Firenena” hoy ny Conamept - Lakroan'i Madagasikara on line - Les actualités sociales et religieuses à Madagascar
Nampivoarana ny fahafantarana ny hoe : « Aiza ho aiza ny tanjona kendren’i Madagasikara raha ny resaka fanabeazana ». Isan’ny noresahana tamin’izany ny tanjon’ny fampandrosoana lovain-jafy fahaefatra. Mifandray amin’ireo tanjona 16 hafa ve izy ireo ?
Niezaka nampiseho ny firaisankinan’ny fiaraha-monim-pirenena misehatra amin’ny fanabeazana. Isan’ny tanjona amin’izao hetsika izao ihany koa ny fifandraisan’ireo fiaraha-monim-pirenena eto Analamanga amin’ny faritra hafa, indrindra moa ny eto Antananarivo amin’ny renivohi-paritra hafa. Notsindriana ny Tanjon’ny fampandrosoana lovain-jafy fahaefatra satria raha tsara tohana io dia misy tsirim-panantenana ny hahatratrarana ireo Odd na objectifs de développement durable hafa ireo. Tomombana ny fanabeazana ao aminy matoa mandroso ny Firenena iray ary maro no misehatra amin’izany araka ny tokony ho izy. Ary tsy tokony adino fa ny fanabeazana dia zo fototra.
Raha ny tokony ho izy dia mila manao revue sectorielle indroa isan-taona ny firenena. “Mino izahay fa tsy ataon’ny fanjakana ambanin-javatra io revue sectorielle io, indrindra ny minisiteran’ny fanabeazana” hoy Rtoa Huguette Rakotoarivony, mpandrindra nasionaly ny Conamept. Tany amin’ny volana febroary tany isika no nanao azy io, ka tokony efa hanao izany amin’izao fotoana izao.
Ny zavatra mivoaka amin’ny kongresy ity dia entina ho feon’ny fiaraha-monim-pirenena amin’izany revue sectorielle izany. Manampy izany koa ny hanitsiana ny orientation ny asa ataon’ny fiaraha-monim-pirenena.
Mbola maro ny ezaka mila hatao raha ny fanabeazana no resahana, indrindra raha mametraka azy ho laharam-pahamehana isika. Tsiahivina anefa fa ny fanabeazana dia filàna fototra, izy ihany koa no fototry ny fampandrosoana tokony hahatsapa izany ireo tompon’andraikitra. Tsy nisy tonga tamin’ny toerana misy azy ankehitriny raha tsy teo ny fanabeazana. Mila miresaka an-databatra mivelatra, miezaka mitady vahaolana fa tsy samy manao izay tiany, izay tokony hatao no atao fa tsy izay tiana atao. Tsy ampy fotsiny ny fahalalana mitafotafo satria ny fanahy no olona.
Fampianarana ankapobeny : Hiverina an-dakilasy ireo mpianatra hanala fanadinam-panjakana rehetra - il y a 6 jours
Journée mondiale du livre et du droit d’auteur : Lire et respecter les auteurs : sensibilisation digitale des Happy Women - il y a 14 jours